10 zvinhu zvaunofanirwa kuziva usati watora DMAA | AASraw
10 zvinhu zvaunofanirwa kuziva usati watora DMAA
/Blog/garari/ 10 zvinhu zvaunofanirwa kuziva usati watora DMAA
Posted on 11 / 28 / 2018 by 阿斯劳 akanyora garari.
DMAA inogadzirwa nemishonga inobatsira mukuvaka muviri, kupisa kwemafuta emuviri uye nekuvandudza kweyepfupi-ndangariro chiyeuchidzo uye chiito chekufungidzira. Ichi chinyorwa chinosanganisira DMAA muyero mabhenefiti uye zvinogona kuitika mhedzisiro ye1,3-dimethylamylamine.
Chii chinonzi DMAA?
Understanding chii is DMAA chinofanira kunge chiri chimwe chezvinhu izvo chero mutambi anosimudzira mashandiro anofanira kusimbisa asati adzika pasi kuti ashandise chinowedzera. DMAA inova ipfupi fomu yemakemikari dimethylamylamine mushonga waimbove unofungidzirwa kuti wakatorwa kubva kuiyo chaiyo geranium mafuta. Nekudaro, kuburikidza nekutsvaga, zvakave zvichisimbiswa izvo 1, 3 dimethylamylamine inogadzirwa mumarabhoritari.
Iyo zvakare inonzi 1,3 DMAA, mushonga unogovana yakafanana chimiro negermanium yakatorwa mishonga. Ichi ndicho chikonzero vanhu vazhinji vakafunga kuti DMAA yaivewo yekirasi imwechete yemishonga. DMAA pre Workout izwi rinofananidzwa nevanhu vanoshandisa iyo yekuwedzera sezvo ichinyanya kushandiswa neavo vanoda kutanga yavo yekuvaka muviri uye yekucheka zvikamu.
DMAA poda yakatanga kuunzwa mumusika naEli Lilly neKambani muna 1944. Mushonga uyu wakawana kushandiswa kwakawanda mumushonga sedhoma remumhino. Mushonga uyu wakashandiswa nekuda kwechinangwa ichi sezvo zvakawanikwa kuendesa mhedzisiro yakafanana nekushandisa ephedrine uye pseudoephedrine.
Pakutanga, vanhu vazhinji vaitenda kuti DMAA yakatorwa kubva kumafuta egeranium. Nechikonzero ichocho, zvakajairika kuwana mafemu mazhinji anogadzira DMAA yekuwedzera inoratidza mifananidzo yemaruva geranium zvidyarwa zvemiti senge midzi uye hunde. Zvisinei, pasinei nekutenda uku kunogara kwenguva refu, kuongororwa kwema laboratori paDMAA kwakaratidza zvimwe.
Izvo zvave zvichiratidzwa kuti DMAA inogadzirirwa zvakaumbwa murabhoritari uye haina kuita senge yakasikwa sezvaitendwa kwenguva refu. Mushure mekutanga kwekutanga kumusika, mushonga uyu wakazotengeswa zvakanyanya sezvo vatambi vakafadzwa nezvakabuda. Izvi zvaive kusvika 1983 pakabviswa muwedzero kubva pamusika.
Kuregererwa kwakakonzerwa nezvakataurwa kuti zvaive zvisina kuchengetedzeka kutengeswa muma pharmacies eruzhinji. Kurambidzwa uku kwakakonzera kushomeka kwemushonga kunyange hazvo wanga uchiri kutengeswa mumusika mutema. Kutengeswa paruzhinji kweDMAA yekuwedzera kwakatangwazve muna 2006 payakatengesa pasi pezita nyowani, Geranamine.
DMAA yekuwedzera haina kungotengeswa chete. Panzvimbo iyoyo, yakaverengerwa mukurema uremu zvinowedzerana uye yakarongedzwa semitambo yekumhanyisa kugadzirisa mushonga. Kudzokororwazve kwechirwere mumakemikari eruzhinji kwakadaidzira dzimwe nharo pamusoro pekuchengetedzwa kwekushandisa kwayo kumumhanyi anosimudzira mashandiro.
Zvinonetsa zvave zvichinyanya kukoshesesa zvekuti Kudya neDrug Administration (FDA) kusvika pakubvunza vagadziri vezvinowedzerwa kuti varatidze kukodzera kwayo kushandiswa pasina kukonzera zvinokatyamadza. Nyika dzakaita seCanada dzakasimudzawo kunetsekana nezve chinangwa chayo, uye yakarambidzwa.
Izvo zvakare hazvina kuchengetedzeka kuti zvishandiswe nevanokwikwidza vatambi semuna 2010, uye World Anti-Doping Agency nguva pfupi yadarika yakazvinyora sechinhu chinokuvadza icho chakarambidzwa kushandiswa. Naizvozvo, mutambi anowanikwa achishandisa mushonga uyu anogona kunge achirambidzwa kutora chikamu mumitambo yemakwikwi. Nekuda kwekukakavadzana kwakabatana nekushandiswa kwayo, DMAA inorambidzwawo mumauto eUS.
Iyo yekuwedzera yakangobva kubviswa muzvitoro zvemauto kudzora mashandisiro ayo. MuNew Zealand, kushandiswa kwemushonga hakubvumidzwe. Inofungidzirwawo kuti haisi pamutemo muUnited States parizvino.
Chii chinonzi DMAA chinoshandiswa?
Iyo chaiyo inoshanda mashandiro e, DMAA haina kuratidzwa. Nekudaro, mushonga uyu unofungidzirwa kutevedzera zviito zveasdrenaline. Pamusoro pekushandisa, DMAA inobata zvakananga iyo yepakati tsinga system.
Mushonga uyu unozivikanwa kuti unoburitsa kukurudzira kwakanyanya kwakafanana nekushandisa caffeine. Zvisinei, maitiro ekuita kweDMAA akasiyana neaya e caffeine. Kana ikatorwa, DMAA inokonzeresa kugadzirwa kwenoradrenaline inova hormone inogoneswa panguva yekushushikana kana kutya.
Iyo hormone inogadzirwa mune adrenal gland ayo anowanikwa pamusoro peitsvo chete. Pakuburitswa, iyo hormone inotenderera muropa, uye izvi zvinokonzeresa kuwedzera kweiyo kurova kwemoyo.
Kugadzirwa kwe noradrenaline zvakare kunokurudzira iyo system yemuviri kuburitsa glucose kubva kune glycogen reserves. Izvi zvinotungamira mukuvandudzwa kwesimba kuyerera mumhasuru yemuviri, uye izvi ndizvo zvinoshuviwa nevatambi vazhinji vasati varovedza muviri. Kushandiswa kweDMAA kunotungamira kune kumwe kugadzirisa mune zvimwe zvinhu sekusvinura, kukurudzira uye nenguva yekuita.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero zvekutanga nei DMAA ichishandiswa zvakanyanya nevatambi vasati vatanga musangano wekudzidzira. Mushonga uyu unopa kunzwa kwesimba rakakura kuita kuti mutambi ade kuita chiitiko chinozoshandisa iro rakawandisa simba. Iko kushandiswa kweDMAA kwakachengetedza vatambi kubva paavhareji kunzwa kwesimba kunouya pamwe nekuita kweinowanzo shandiswa caffeine.
DMAA ndeye kuvandudzwa kwe caffeine, uye avo vanoishandisa kwenguva refu vanogona kutanga kukudziridza kupindwa muropa. Izvi zvinoreva kuti kushandiswa kunodzorwa kwakakosha. Kana ikashandiswa, inotsamwisa uropi kuti ikurudzire kunzwa kwesimba rakakura rekusimudzira.
Kuwedzera kwepamusoro kweropa kunoperekedza izvi. Nekuda kweiyi nzira yekuita, vanhu vazhinji vanowanzo shandisa zvinodhaka. Nekudaro, vamwe vatambi vanoshandisa mushonga nechinangwa chinovaka pamiviri yavo. Izvi zvinotevera zvimwe zvekushandisa kwakanaka kweDMAA:
AASraw ndiye nyanzvi yekugadzira DMAA.
1. Kutsva kwemafuta
Kazhinji, muviri unopisa chaiwo mafuta. Nekudaro, izvi zvinogona kunge zvichiitika pamwero unononoka kupfuura izvo zvinodikanwa. Kukurumidzisa maitiro ekushandisa ekuwedzera akagamuchirwa neanosimudzira emitambo vatambi. Kunyanya zvimwe zvezvinowedzera izvi steroid dzakadai Nootropics.
Kushandiswa kwezvokuwedzera zvakadaro kunovandudza mwero wekupisa. DMAA inoshanda senge zvimwe zvinozivikanwa zvinowedzera mukutsva kwemafuta akawandisa. Mazhinji maseketi ekurovedza muviri akagadzirirwa kuwana mibairo mizhinji, chikuru pakati pavo iko kudzikiswa kwemafuta emuviri akawandisa anopa muviri kukwezva kusingadiwe.
Mafuta akawandisa anoisa njodzi kuhutano hwemutambi nekuti mamiriro akadaro anogona kusimudzira kuvhara kweropa tsinga. Kana izvi zvikaitika, panogona kunge paine kuyerera kushoma kweoksijeni muropa uye chiitiko cheicho chemunhu chingave chakakanganiswa zvakanyanya. Iye zvino kiyi yekudzivirira mamiriro akadaro ndeyekushandisa kwechirimo senge DMAA iyo inopa muviri wako nemazinga akakwirira esimba.
Kamwe paine simba, mushandisi ari kushinga kuita zviitiko zvinodya simba, uye semhedzisiro, panogona kuve nekuderedzwa kwemafuta emuviri anokuvadza uye asingadiwe. , uye izvi zvakakosha kune vatambi vanoda kuzadzisa izvi kunyanya panguva yekucheka kwemwaka. Kubudirira kwechirwere kunenge kusingagumi.
Kana ichibatanidzwa neinosimudzira senge caffeine, DMAA yakawanikwa ichivandudza muviri wemuviri chiitiko neinenge 35%. Izvi, zvakare, zvinobatsira kugadzirisa iwo mwero wekupisa kwemafuta nemahara akakosha anozivikanwa. Mushonga unoshanda nekuona kuti zvinokonzeresa mafuta achipisa pakutanga muviri usati waratidza kuti zviitike zvakasikwa.
Sezvo chiito cheDMAA chakabatana chaizvo nepakati sisitimu yetsinga, mushonga unovimbisa kuti unokonzeresa chiito ichi nekukurumidza. Pakukurudzira, iyo CNS inopindura nekukonzeresa maitiro emaketeni ayo anogonesa kupisa mafuta. Naizvozvo, zvingave zvakakodzera kuenzanisa chiito cheDMAA nemamwe mafuta epamusoro anopisa zvinowedzera mumusika.
2. Kuvaka Muviri
Chinhu chakanyanya kukosha pamberi pebasaji isimba. Ndosaka iwe uchifanira kutarisa izvo zvingangokupa izvi zvidimbu zvemasimba kuti iwe uenderere mberi. Mesomorph pre Workout dmaa
ndiyo mhando yechinhu chekupa wekuvaka muviri iyo yakakodzera musoro kutanga iyo iwe yaunoda kuti yako Workout ibudirire.
Sezvakatsanangurwa pakutanga, mushonga uyu unozivikanwa nekupa mhedzisiro yakafanana nepseudoephedrine. Ichi chinodhaka chinoita kuti mushandisi aite 'yakakwira' maitiro. Izvi zvinopa imwe ine guru resheni yesimba iyo inodikanwa mukusimudzira uremu.
Kuti uwane mhedzisiro yakanaka, mushonga unopa simba rakawanda unofanirwa kutorwa pasati pamboitwa musangano. Izvi zvinounganidza mushandisi nemabout emagetsi izvo zvinongodiwa nevatambi vese vanosimudzira mashandiro ekuti mazuva avo atange pane yakakwira noti. Mushonga wakadai unoita izvi nekukanganisa imwe yemasikirwo epanyama maitiro emuviri.
Paunenge uchidya, mushonga uyu unowedzera vasodilation. Aya maitiro anoitika kazhinji kana paine kupisa kwakanyanya mumhepo. Muviri unoita nekuwedzera saizi yetsinga. Izvi zvinorehwa kuunza rimwe ropa paganda pamusoro pekutonhora.
Mazhinji mashandiro ekusimudzira mashandiro ane nitric oxide iyo inosimudzira kuwedzera kwemitsipa yeropa kuburikidza neasodilation inokonzerwa. Uku ndiko kuwedzerwa mukana kune mutambi, kunyanya panguva ye pre-workout. Kamwe ikakura, iyo nzvimbo yekutakura ropa rakawanda inowedzerwa.
Izvi zvinopa iye mutambi nemubhadharo wekufamba kweropa izvo zvisati zvambovapo pamberi pekushandisa mushonga. Shure kwaizvozvo, kudzidziswa kwakasimba kunogoneka, uye mutambi ane simba rakawanda rekusimudzira kukura kwemhasuru.
Zvisinei, kushandiswa kweDMAA pamusoro pekuremekedza kwakawanikwa kuchipesana nezvinotarisirwa nevanhu vazhinji nezve mushonga unosimudzira-kuita. Panzvimbo pekuvandudza vasodilation senge yakawanda nitric oxide zvinodhaka, DMAA inoita zvinopesana. Izvo zvinokonzeresa vasoconstriction iyo inowanzoitika mukati menguva apo tembiricha mumhepo dzakadzika.
Panguva yakadai, muviri unonetsekana kuchengetedza tembiricha, uye izvi zvinokonzerwa nekubvisa ropa kubva pamusoro peganda. Izvi, zvakadaro, zvinoitika kana muyero wacho wakanyanya kukwirira uye haufanire kunge uri kunetsekana kune mumwe munhu arikuronga kutora DMAA.
3. Inobatsira kuvandudza kwenguva pfupi ndangariro uye chiito chekufungidzira
Wese munhu angafarira kuyeuka zvese zvavanoda. Nekudaro, izvi hazviwanzo kuitika nekuti hupenyu hwevanhu hunosangana nezvakawanda zvinoitika zvinoita kuti zviome kuti izvi zviitike. DMAA inogona kuve yekuwedzera inobatsira pamberi apa.
Zvidzidzo zvakaitwa zvevashandisi veiyi yekuwedzera zvakaratidza kuti avo vaibatanidzwa vaive nani zvirinani zvenguva pfupi ndangariro kupfuura vasati vaishandisa. Naizvozvo, kunyangwe hazvo vasiri vanhu vazhinji vanotora mushonga nechinangwa chekuzadzikisa izvi, zvinouya sekuwedzera-kune maitiro ekushandisa kwayo. Uye ndoimwe yemabhenefiti ekutanga anokohwa nevanhu vazhinji kubva pakushandisa DMAA kunyangwe iwe izvi zvinoitika pasina kuronga kwavo.
Yepamusoro Reflex chiito zvakare hunhu kuti vatambi vazhinji vangade kusangana nazvo. Kushandiswa kweDMAA kunoita kuti muviri uve wakangwarira, uye izvi zvinovandudza mashandiro ekuita. Izvi zvinoreva kuti vashandisi veDMAA vanoshanda zvakanyanya kunyanya panguva yekuvaka muviri kana mumakwikwi. Mushonga unoshanda nekuvandudza mwero weiyo metabolism yemuviri.
Izvi zvinokonzeresa kuti maitiro emuviri aitike nekukurumidza kupfuura zvakajairwa. Izvi zvinoonekwa mumuviri nekuva nemunhu anoshingairira uye akangwarira. Nekudaro, iro chete rinodzima pane ino kumberi ndeyekuti kushandiswa kwechirwere mumakwikwi kwakarambidzwa.
Naizvozvo, mashandisiro ayo ekuvandudza chiito chekufungidzira panguva yemitambo haitenderwe. Iyo inogona zvakadaro ichiri kushandiswa nevatambi panguva yemwaka wekupedzisira kuti vawane kubhowa uye kuvandudza kwekumhanya.
DMAA Inowedzera Zvakachengeteka Here?
Izvi zvinofanirwa kuve kunetsekana kune chero munhu ari kutora chikamu mumakwikwi emitambo. Mushonga uyu wakanyorwa pakati pemishonga isina kuchengetedzeka kuti ishandiswe nesangano repasi rose rekushandisa zvinodhaka. Mimwe mizhinji miviri yakadzora kushandiswa kweDMAA kunyanya masimba. Zvisinei, uyu ndiwo musoro wenyaya wakadhirowa maonero akasiyana siyana.
Sangano reUnited States 'Chikafu neDrug Administration (FDA) rinoona DMAA zvinowedzera kunge zvisina kuchengetedzeka mukushandisa kwevanhu. Sangano rinotaura kuti hapana ruzivo nezve chiitiko cheDMAA chinoita kuti chive mushonga wakachengeteka wekushandisa. Pawebsite yeiyo agency, mutumbi unopa zano vanhu kuti vadzivise kushandisa mushonga nenzira dzese nekuti unokwanisa kuvaisa panjodzi dzehutano.
Imwe yezvinonyanya kunetsa zveDAA kugona kwemushonga kukonzera vasoconstriction. Izvi vanopikisa ndeyekutungamira kweropa rakakwira iro rinogona kupedzisira raendesa kurufu kana risina kubatwa nekukasira zvakakwana. Mimwe yekufema turakiti mhedzisiro iyo inogona kuve neruzivo nekushandiswa kweDMAA inosanganisira kunetseka mukufema, kushaya kwemoyo uye mukana wakanyanya wekubatwa.
Sekureva kweFDA, kushandiswa kwemushonga zvakare kunogona kukonzera kusagadzikana kwetsinga sezvo kuchinyanya kushanda kuburikidza nekufurira sisitimu yepakati. Izvi zvinogona kuve nenjodzi sezvo zvinogona kukonzeresa kuoma mitezo pamwe nemamwe matambudziko anouraya.
FDA yakave yakashinga kwazvo mukuona kuti DMAA ine zvinowedzera zvinodzimwa kubva pamusika zvizere. Chinokosha pakati pematanho akasiyana siyana avakaita iri kuburitsa makemikari emishonga netsamba dzinovadziisa pakutengesa DMAA ine zvinowedzera. Kana zvikaitika kuti vawane zvinowedzerwa pamasherufu, iyo agency inobvunza vatengesi kuti vavaparadze uye varegedze kugadzira imwe odha kubva kune vanogadzira.
Parizvino, mafemu mazhinji anga achiteerera. Mushandirapamwe uyu wakatanga mu2012, uye wakatora kushanda kuzere sezvo paine iko kwazvino kutengeswa kwakadzika kwazvo kweDMAA zvinowedzera. Ikoko kwave kune zviitiko zvekuti mamwe mafemu anoenderera nekuburitsa DMAA kunyangwe mushure mekukumbirwa kumira neDFA.
Mhosva dzakadai dzakapupurwa muna2013 apo femu inonzi USPLabs yakaramba kumira kugadzira zvinowedzera. FDA yakamisa mashandiro avo, uye iyo femu iri mubvunzo yaifanira kuparadza zvigadzirwa zvaive zvatove mumusika. Mari yavo yekutengesa yekutengesa yaive madhora zviuru zvisere.
Izvi zvinoratidza kureba kwesangano iri kuda kuenda mukuona kuti kugadzirwa kweDMAA zvinowedzerwa kumiswa uye hapana kana mushonga mumwe chete iwoyo unowana nzira kuvagari venyika. FDA yaenda nhanho yekuwedzera uye yakanyora mazita akasiyana ayo vagadziri vanogona kushandisa kudzivirira vatengi kubva pakuziva kuti vari kudya DMAA. Izvi zvakaitika mushure mekunge sangano razviona kuti makambani mazhinji aigadzira mushonga uyu mumazita akavharidzirwa kudzivirira vatengi kubva mukuziva nemazvo mushonga wakarambidzwa.
Mamwe emazita akasarudzwa anosanganisira Geranamine neMethylhexanamine. Mamwe makambani anoratidza kuti chinowedzerwa chine michero yemiti yeGeranium. Ichi chiratidzo chekuvapo kweDMAA. FDA inoyambira vatengi kuti vangwarire chero chinowedzerwa chine zvinyorwa kubva kuGeranium.
Zvinorambidzwa zvakafanana kune dzimwe nyika dzakaita seCanada neNew Zealand nevamwe vazhinji vari munyika. Kunyanya kunetsekana kwese kwese ndeye mhedzisiro yazvo kufema system. Sangano repasi rose rinorwisa-kushandisa zvinodhaka rakanyorawo DMAA upfu pakati pemishonga isina kuchengetedzeka kuti ishandiswe nevanhu. Izvi zvinoreva kuti inorambidzwa kushandiswa nevatambi vanobatanidzwa mumakwikwi akaita seWorld Cup.
Izvo zvakadaro zvinotenderwa kushandiswa mune mimwe makwikwi kunyanya mumadosi madiki ari mukati mematanho anotenderwa. Nekudaro, zvinogara zvakanaka kuve nechokwadi nezvezvirambidzo zvemakwikwi izvo munhu anotora chikamu maari asati atora mushonga kuti arege kumhara mumatambudziko.
Nyaya yekuti DMAA yakachengeteka yakatora kumwe kutsauka mushure mematareji akasiyana siyana pakati peDFA nemamwe makambani. Makambani aya akaramba achimanikidza kuti paive pasina chakaipa nezvekutengesa yekuwedzera zvinodhaka. Imwe ongororo yakaratidza kuti DMAA chaive chigadzirwa cheiyo Geranium chirimwa uye izvi zvaipikiswa neDFA.
Nekudaro, iyo agency haina kupa chero humbowo hunotsigira kutsigira zvirevo zvekuti mushonga wakawanikwa zvakagadzirwa. Sekureva kwachiremba uyo akaongorora zvirevo zvekusachengeteka kwekushandisa iyo yekuwedzera, hapana chakashata mhedzisiro ingatarisirwa mune munhu akasimba ane hutano uyo akashandisa chinowedzerwacho nenzira kwayo. Iye mushonga akapokana kuti huwandu hweDMAA hunowanikwa mune pre-Workout zvinowedzera zvaive nenzira pazasi peizvo zvinofungidzirwa kuti zvine chepfu kushandiswa kwevanhu.
Mune imwe ongororo, vechidiki vanga vachishandisa DMAA seinosimudzira panguva yemapati vakawanikwa vachikura chirwere chakajairika, sitiroko yekurohwa. Izvi zvakapfuurira kusimbisa chirevo cheDAA nezve kuchengetedzeka kwekushandisa DMAA mune zvekuwedzera. Nekudaro, kumwe kuongorora kwakabvarura humbowo hunotsigira hweDAA kuita zvidimbu mushure mekuonekwa kuti vechidiki vari mubvunzo vakashandisa muyero wakanyanya kwazvo wechirwere.
Zvakaratidzwa kuti vakatora mapiritsi ayo ega ega aive neakakomberedza 600mg yechinhu chinoshanda. Izvi zvaive zvakakwirira senge mune zvakajairwa mamiriro, uye mari inotarisirwa kwazvo yakatenderedza 60mg mune imwe yekuwedzera piritsi. Izvi zvinoreva kuti vechidiki ava vakadya kagumi pane zvavaifanira kutora.
Muchidimbu, kubva pakuona kwesainzi, mushonga uyu unogona kutariswa seyakachengeteka pre-Workout mushonga chero kupihwa kwakakodzera mishonga yacho inotorwa. Kana DMAA ikatorwa mumadosi epamusoro kupfuura 75mg, pane mikana yekukwirisa kweropa kumazinga asingadiwe, uye nekudaro izvo zvinofanirwa kutariswa. Mushonga uyu unofanirwa kungoshandiswa nevanhu vasina kumbove nehuremu hwekukwira kweropa munguva yakapfuura sezvo mashandisiro awo anogona kukuvadza mamiriro ezvinhu.
Zvakare, kunyangwe FDA isina kubvumidzwa nemakambani mazhinji ari kuburitsa mushonga, vane poindi nezve kuchengetedzeka kwekushandisa kweDMAA. Saka hazvikurudzirwe kushora zvinovanetsa uye kuramba uchitenga zvinowedzerwa kubva kumusika mutema. Kubvunzana nachiremba usati washandisa DMAA pre-Workout poda yakakosha.
Izvi zvichave nechokwadi chekuti mhedzisiro inodiwa inowanikwa kunze kwekuchenesa hutano kuchengetedzeka kwemushandisi.
Chii chaunoda kuziva usati watora DMAA zvinowedzera?
Pane zvakawanda zvine chokwadi chekuti chero mutambi anosimudzira mashandiro anofanira kuuya kuzotarisana nawo asati agadzikana paDMAA semushonga wepamberi wekurovedza muviri wesarudzo. Zvimwe zvezvinhu izvi zvinosanganisira mhedzisiro iyo munhu angangosangana nayo pamwe nezvakanaka zvauchakohwa kubva mukushandisa kwayo.
Chekutanga pakati pezvinhu zvaunofanira kuziva ndechekuti mhedzisiro yekushandisa ichi chinodhaka yakafanana neicho chinogona kuvepo mushure mekushandisa kwecocaine uye methamphetamine. Izvi zvinoreva kuti mukana wekukudziridza kupindwa muropa wakanyanya kwazvo sezvo uchikwira pamusoro pakati pemasimba ane simba anozivikanwa. Iwe unofanirwa kuziva kuti iwe unogona kunge uri kuvhura muviri wako kune imwe yeakanyanya kupindwa muropa apo iwe uchiedza kunatsiridza yako Workout.
Kuti udzivise mikana yekupindwa muropa, unofanirwa kuona kuti unonyatsotevedzera zvinotendwa nachiremba wako zvakachengeteka pahutano hwako. Izvo zvakare zvakakosha kuti unzwisise kuti kushandiswa kwechirwere ichi kuchakanganisa iyo yepakati tsinga system. DMAA inoita zvakafanana necaffeine nekuderedza mwero wekugamuchira weCSS kuita kuti muviri wako uve wakangwarira.
Mushonga uyu une simba kupfuura caffeine uye unopa muviri wako simba rekusimudza raunoda kuti utange musangano wako wekudzidzira pachivharo chepamusoro. Saka saka zvakare zvakakosha kuti utarise muyero waunoshandisa sezvo mushonga wacho unokanganisa zvakananga chimwe chezvikamu zvemuviri zvakanyanya. Mune imwe nyaya yakataurwa muna 2012, boka revadiki rakashandisa kushandisa mushonga uyu panguva yepati.
Vakadya zvakapetwa kagumi kupfuura izvo zvinodiwa kune imwe-nguva muyero. Chinangwa ichi chaive chekukwira kumusoro nekukasira, uye izvi zvakazoguma zvava kugadzirisa kwavo. Mushonga uyu wakabata hurongwa hwavo hwepakati, uye vazhinji vakawanikwa vaine chirwere cheperesa chinova chirwere chisingaperi.
Vashandisi zvakare vanofanirwa kunzwisisa kuti zvakasiyana nezvimwe zvakawanda pre-Workout zvinowedzera izvo zvine nitric oxide, DMAA inokonzera vasoconstriction yemitsipa. Izvi zvinoreva kuti munhu anenge atora mapiritsi eDMAA anenge adzora tsinga dzeropa pane mumwe asina. Iyi mamiriro anogona kuuraya kana zvikaitika kune mumwe munhu ane dambudziko rekukwira kweropa sezvo zvichikwanisa kuwedzera kuomarara kwechirwere.
Naizvozvo, munhu anotambura neBP yakakwira anofanirwa kurega kushandisa DMAA.
Kushandiswa kwechirwere ichi kunogona kukonzera kuwedzera kweropa kuyerera uye kunzwa kwesimba rakakwira. Kubatanidza iyo yekuwedzera pamwe nekumwe kuita kwekusimudzira mishonga kunogona kuva nenjodzi sezvo izvi zvinogona kukonzera kuti muviri wako uve nesimba rakakura rausingakwanise kubata. Zvinokurudzirwa kuti unzwisise kuti DMAA inonyanya kuita pre-Workout yekuwedzera iyo isingafanire kushandiswa kune chero zvimwe zvinangwa.
Vamwe vanhu vakamboishandisa sechinhu chinosimudzira bonde, asi izvi hazvina kunaka. Izvo zvinogona kutungamira kumusoro kuenda mukuenda kukoma kana ukashungurudzwa uye izvi zvinofanirwa kugara zvichitariswa panguva yekushandisa.
DMAA pre Workout uye pre Workout mhedzisiro
Mushure mekudyiwa kweDMAA, vamwe vanhu vakawana pre workout mhedzisiro mhedzisiro inosanganisira kusvotwa uye kurutsa. Izvi zvakajairika, uye zvinoreva kuti muviri wako ungangoita zvisina kunaka kumushonga. Zvisinei, kurutsa uye kusvotwa kunogona kunge kusingaiti kunokonzerwa zvakananga neDMAA kushandiswa. Iyo kemikari iri mune zvinowedzera izvo zvine zvimwe zvinoumba, uye zvinogona zvakare kuve zvikonzero zvekurutsa.
Kunze kwezvo, zvimwe pre-Workout mhedzisiro zvakajairika nekushandiswa kweanokurudzira akadai seDMAA. Izvi zvinosanganisira:
Kukanganiswa maitiro ekurara
Zvakawanda zvinowedzera zvinouya nezvikamu zvevanhu vanoregererwa kushandisa, uye kiyi pakati pavo inosanganisira vanaamai vanoyamwisa pamwe nevaya vane pamuviri. Chikonzero chiri shure kweizvi ndechekuti, mune mamiriro evakadzi vane nhumbu, kushandiswa kwemishonga kunonyanya kukanganisa kukura kwemwana asati aberekwa. Zvisinei, kunyange zvazvo ruzivo rwakanyanya ruripo pamusoro pekushandiswa kwezvakawanda zvinowedzera kumapoka evanhu, izvi hazvisizvo neDMAA pre-workout drug.
Kune ruzivo rwakashomeka zvine chekuita neizvi. Naizvozvo, avo vane chinangwa chekushandisa DMAA seyakatangira-kurovedza mushonga uye vane nhumbu kana kuyamwa vanofanirwa kurega kuzviita sezvo paine ruzivo rwushoma kwazvo nezvezvinotarisirwa mhedzisiro. Iyi ichave nzira yakachengeteka pane kutungamira mushandisi kumhedzisiro iyo ivo vasina kumbofunga nezvayo.
DMAA chinodhaka inorondedzerwa seinosimudzira. Izvi zvinoreva kuti ingangoita zvinokanganisa mukana wekuvhiya kwakachengeteka kunyanya kana ichinge yatorwa nguva pfupi isati yatanga kuvhiyiwa. Naizvozvo kuti udzivise mamiriro akadaro, zvinokurudzirwa kurega kuishandisa kana iwe wakagadzirirwa kuvhiya.
Zvinokurudzirwa kurega kutora chero chinosimudzira usati wavhiyiwa. Uku kudzivisa kukwirira kweropa kunogona kuuraya panguva yekuvhiyiwa.
Iyi ndiyo inonyanya kuoneka mhedzisiro mhedzisiro iyo yakafanana nevanhu vanoshandisa DMAA. Izvi zvinodaro nekuti mushonga uyu unosimudzira uye mazhinji madhiragi ekirasi ino anozivikanwa kukonzera kukwirisa kweropa kunyanya kana achishungurudzwa. DMAA inotungamira pakuderera kwemitsipa yeropa, uye izvi zvinoita kuti ropa riyerere nekukurumidza kupfuura zvakajairwa zvichikonzera kuwedzera kweropa.
Nekuda kweiyi divi mhedzisiro, iko kushandiswa kweDMAA kwakawanikwa kuchikonzera zvimwe zvirwere zvakashata senge cerebral sitiroko. Panyaya yechiratidzo ichi, mushandisi anofanira kurega kushandisa mushonga izvozvi. Izvi zvinodaro nekuti kuenderera kwayo nekushandisa kunogona kuwedzera zviratidzo uye kunogona zvakare kutungamira kurufu.
Zvisinei, zvinokwanisika kudzivirira kukwira kweropa kuburikidza nekushandisa kwakadzora. Izvi zvinopa mibairo yakanaka kwazvo kana ichigadziriswa nemushonga anozotora bvunzo kuti aone kuti muyero wakakodzera chii.
DMAA inogara kwenguva yakareba sei mune yako system?
Nzira yakajairika yekutungamira kweDMAA ndeyemuromo. Kana ikatorwa nenzira iyi, mushonga uyu unotora maminetsi masere kuti upinde muropa remutengi. Nekudaro, mhedzisiro yacho haizonzwikwe nekukasira sezvo madhiragi mazhinji ane izvo zvinonzi hafu-yehupenyu nguva. Ino ndiyo nguva inodikanwa kuti mushonga uparadzane uye ubudise zvinoshanda mumuviri kuti ushandiswe.
Iyo hafu-hupenyu hweDMAA inenge maawa masere. Naizvozvo, munhu anoda kukwidziridza muviri wake isati yatanga nguva yekurovedza muviri anofanira kutora mushonga maawa masere asati apa nguva yakakwana yekuti mushonga upinirwe mumuviri.
Mushure mekushandisa kwechirwere, kunzwa kwakawanda kwekuve wakakwirira kunoitika. Kazhinji, uku hakusi kunzwa uko vanhu vazhinji vangade kusangana nako kuburikidza nenguva kunyanya kana ivo vasiri kushanda kunze. Iko kune, saka, iko kudikanwa kwekuziva kuti inguvai inotorwa nemushonga kuti idzingwe kubva mumuviri mushure mekudyiwa.
Paavhareji, mushonga unochengetwa mumuviri kweinenge zuva remaawa makumi maviri nemana mushure meizvozvo manzwiro acho haasisina ruzivo.
Zvakanakira DMAA yeMafuta Kupisa
Zvichida, iwe wakanzwa dzakawanda ngano uye chokwadi maererano nekugona kweDMAA mukudzikira uye ungade kuziva kuti ndeupi wavo unonzwisisika. Zvakanaka, chokwadi chenyaya ndechekuti DMAA zvinowedzera zvinogona kukubatsira iwe kudurura huwandu hwakakura hwehuremu munzira dzakasiyana siyana.
Kutanga, Dimethylamylamine yekuwedzera inogona kukubatsira iwe kuwedzera kutarisisa uye zvinokurudzira kusvika padanho rekuwedzera kushivirira kwako pakurwadziwa nesimba. Iko kusimba kwesimba uye kushivirira kwekurwadziwa kuchakubatsira iwe kuenda kuhuremu hwakaomarara hwekudzidziswa uremu zvinobudirira.
Kana zvasvika pakutsva kwemafuta emuviri, 1 3 Dimethylamylamine ndeimwe yeakakurumbira thermogenic mafuta anopisa. Kungofanana neruzhinji rwemafuta anotsva anotsva anowedzera, DMAA inokonzeresa kutsva kwemafuta nekukurumidza kupfuura zvakajairwa mune kesi umo kupisa kwemafuta kunonyanya kusingaitike.
Uri kushamisika here? dmaa inoita sei kupisa mafuta mumuviri wako?
Zvakanaka, DMAA inowedzera simba rako kuburikidza nevasoconstriction, maitiro anosanganisira kumisikidza kuyerera kweropa rako. Kurambidzwa kuyerera kweropa kunokonzeresa kukura kwemhasuru pamwe nekusimudzira mhasuru. Mukudaro, yako metabolism metabolism inowedzera, zvichitungamira kukurumidza uye nekukurumidza kupisa mafuta emuviri.
Izvo zvivakwa zveDMAA, ephedrine uye amphetamines zvinogovera zvakawanda zvakafanana. Mukudaro, DMAA inogona kukurudzira hutongi hwevanhu, zvichikonzera uropi kuburitsa norepinephrine. Zvakare, inogadzira alpha uye beta receptors yemuviri kuve nekuwedzera chiitiko che noradrenaline, zvichidaro zvichikurudzira iyo adrenergic receptor system zvisina kunangana.
Kubatanidzwa kwezviito zvese izvi kunotungamira mukuwedzera kweiyo metabolic mwero pamwe nekuparara kwemafuta kubva mudipose tishu kuti ibudise simba - maitiro aya anonzi lipolysis.
Mhedzisiro yeDMAA inogona kuwedzerwa zvakanyanya kana ikashandiswa pamwe chete nezvimwe zvinomisikidza zvinhu zvine caffeine.
Kana ikashandiswa pamwe chete necaffeine, mhedzisiro yeDMAA pane chiyero chemetaboli inowedzera ne35% nepo mafuta ekutsva anoshanda anowedzera kupfuura anopfuura 169%
Mune ongororo ichangoburwa yakaitwa kuongorora kushanda kweDMAA mukupisa kwemafuta, vanhu vakuru makumi matatu nevaviri vane hutano avo vakamwa one capsule yekuwedzera kwayo zuva nezuva kwemazuva gumi nemana vakaona kurasikirwa kukuru kwemafuta.
Kungofanana chero mumwe mushonga, DMAA inogona kunge iine mimwe mhedzisiro kana ikashungurudzwa. Heano zvimwe zvezvinobvira DMAA mhedzisiro:
Kunyangwe pasina humbowo hunobatanidza DMAA yakanangana nerebral haemorrhage, pane nyaya yakataurwa yemunhu akavandudza mamiriro mushure mekutora doro rakanyanya uye musanganiswa weDMAA. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive kuti DMAA haifanire kushandiswa pamwechete nedoro neimwe nzira yakadaro mhedzisiro inogona kukunda.
2. Kukuvara kwechiropa
Basa guru rechiropa kusefa ropa reropa rekugaya usati watendera kuti ripfuure kune dzimwe nhengo dzemuviri. Kunze kwezvo, chiropa chinogaya mishonga uyezve chinosvibisa makemikari.
Paunotora DMAA piritsi kana kuwedzera, chiropa chinofanira kubata nechinhu chemushonga / wekuwedzera. Nekuda kweizvozvo, chiropa chinogona kuwana enzyme kuvaka-up iyo inogona kupedzisira yave chepfu. Mushonga uyu unogona zvakare kukonzera kuzvimba kwechiropa izvo zvinogona nekufamba kwenguva zvichikonzera kukuvara kwechiropa nekusingaperi.
Tichifunga nezve icho chinosimudzira, Dimethylamylamine inogona kuwedzera kuwedzera kweropa. Mukudaro, vanhu vanotambura nehigh blood pressure vanofanirwa kudzivirira kutora mushonga kana zvinowedzerwa zvine iyo.
4. Kusajairika kurova kwemoyo (moyo arrhythmia)
Kunyangwe zvisingaite, iyo inokonzeresa mhedzisiro yeDMAA inogona kutungamira mukukurumidza kurova kwemoyo uye izvi zvinogona kukuvadza moyo arrhythmias kune vanhu vanotambura nemamiriro acho. Naizvozvo, kana iwe wakarongerwa kuvhiyiwa, iwe unorayirwa kuti usatora DMAA mavhiki maviri zuva rekuvhiya risati rasvika, zvikasadaro, kuwedzerwa kweropa rakakwira uye kusarongeka kwemoyo nekuda kwekuita kwechirwere kunogona kukanganisa nekuvhiya.
Mune ongororo yakaitwa yekuongorora mhedzisiro yeDMAA, zvakawanikwa zvakaratidza kuti vanhu vakuru vanegumi nevaviri mumwe nemumwe wavo akange ashandisa makapisi maviri eOxyELITE Pro, chikafu chinowedzera chine Dimethylamylamine, yakawedzera kuwanda kwemoyo pamwe nekusimudzirwa kweropa.
Zvakangodaro, vakuru vasere vane hutano vakatora 25 mg dhizaini yeDMAA vaive neyakajairika kurova kwemoyo uye kuwedzerwa kweropa kunyangwe mushure mekutora mushonga. Izvi zvichiratidza kuti mushonga uyu hauna kana chekubata pamwoyo kana kuwedzerwa kweropa kana ukadyiwa mudosi yakadai.
Kunze kwekuve nemhedzisiro inokonzeresa, Dimethylamylamine zvakare inokonzeresa kumanikidza kweropa. Iko kusanganiswa kwemaviri mhedzisiro kunogona kutungamira mukuwedzera kwemamwe marudzi eglaucoma. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kuti urege kunwa mushonga kana uine glaucoma.
6. Chiropa Kukuvadza
Ikoko kwave kunewo zviitiko zvakataurwa pamusoro pekukuvara kwechiropa semhedzisiro yeDMAA kunwa. Makore mashanu apfuura, vanhu makumi matatu nevatanhatu vakange vatora OxyELITE Pro, chikafu chinowedzerwa neDMAA sechinhu, vakaonekwa vaine chiropa chakakuvara. Mumwe wevarwere akafa apo vamwe vaviri vakakwanisa kurarama mushure mekuisirwa chiropa.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti vese varwere makumi matatu nevatatu vaitora muyero wakakurudzirwa weyekuwedzera asi 36 vavo vaitora iyo DMAA-yemahara vhezheni yekuwedzera. Naizvozvo, hazvisi nyore kumisikidza chepfu mukomboni mukuwedzera.
7. Ubongo Kubuda ropa
Iko kushandiswa kweDMAA zvakare kwakabatana nehuropi kubuda ropa. Ichokwadi, zviitiko zvitatu zvevanhu vakambobuda ropa mushure mekushandisa DMAA zvakataurwa. Zvakangodaro, zvakave zvichisimbiswa kuti avo vakaurayiwa vakashandisa mushonga nedoro kana caffeine nguva dzose.
Mune imwe yezviitiko izvi, munhu akagwinya akatora dosi yakakurudzirwa yechikafu chekuwedzera chine Dimethylamylamine uye mushure meizvozvo, akatanga kuve nemusoro wakakomba uchiteverwa nekubuda ropa muuropi.
Pane nyaya yakataurwa yemurume ane makore makumi maviri nemaviri ane hutano uyo akatanga chirwere chemwoyo mushure mekushandisa Jack22d, chikafu chinowedzera chine DMAA pamwe necaffeine kwemavhiki matatu.
9. Nausea uye Kurutsa
Imwe ongororo ichiongorora mhedzisiro yeDMAA yakaratidza kuti 15% yevanhu makumi mashanu nevatanhatu vakange vatora zvinowedzera zvaive nemushonga (OxyElite Pro) vakarutsa uye vane ruzivo rwekusvotwa mushure mekutora zvinowedzera. Nekudaro, pakange pasina humbowo hwakaratidzwa kana iri iyo DMAA mune yekuwedzera iyo yakakonzeresa kusvotwa uye kurutsa kana zvimwe zvigadzirwa zvaive nebasa.
10. Kushaya simba kwenguva pfupi
Iyo inowanzoitika mhedzisiro mhedzisiro inosanganiswa nekushandiswa kweDMAA ndiko kurasikirwa kuri pachena kwesimba ('kuparara') kwemaawa mashoma mushure mekutora mushonga. Nekudaro, havazi vese vanoshandisa izvo zvinoitika zvemushonga iyi mhedzisiro.
Zvimwe zvinogona kuitika mhedzisiro yeDMAA inosanganisira:
Kufa (kunyangwe zvisingawanzoitika)
Aya ndiwo mamwe emhedzisiro mhedzisiro yeDMAA. Zvakangodaro, hapana zvidzidzo zvinongo ongorora mhedzisiro yemhedzisiro yemushonga. Ruzhinji rwezvidzidzo pamusoro pemhedzisiro yemushonga zvinosanganisira zvekudya zvinowedzera neDMAA seimwe yezvigadzirwa zvavo panzvimbo pemushonga uri wega. Tichifunga nezve iyo chaiyo dosi yemushonga mune zvekuwedzera haina kusimbiswa, hapana huchokwadi pakupedzisa kuti mhedzisiro mhedzisiro ndeye mugumisiro weDMAA. Zvimwe zvinongedzo mune zvekuwedzera zvinogona kuve chikonzero chemhedzisiro.
Kunze kwezvo, mune dzimwe nguva, mhedzisiro yakaipa senge yekushandisa zvakanyanya kweDMAA-yakavakirwa zvigadzirwa. Vamwe vevashandisi vakasangana nemhedzisiro iyi vanonzi vakatora kusvika kumamirioni ezuva nezuva. Mune zviitiko zvakadaro, mhedzisiro inogona kudzivirirwa kana munhu akanamatira kune chaiyo yakajairwa muyero. Tichataura nezve iyo chaiyo DMAA muyero munguva pfupi.
Kunze kwezvo, 1, 3 Dimethylamylamine yakawanikwa ichikanganisa zvakanyanya iyo yepakati tsinga system kana ikashandiswa pamwechete neCNS inokurudzira kana nootropics iyo inokanganisa masisitimu edrenergic. Izvi zvinogona kukonzeresa kumhedzisiro mhedzisiro. Naizvozvo, kana iwe uchida kudzivisa mhedzisiro, ita shuwa kuti haubatanidze DMAA nezvinokurudzira kana nootropic.
Zvakare, zvinokurudzirwa kuti DMAA zvinowedzera hazvifanirwe kushandiswa zuva nezuva. Saka, ndeipi chaiyo Dimethylamylamine dosage?
Iyo chaiyo dimethylamylamine dose inoenderana nezvinhu zvakasiyana senge zera uye hutano mamiriro emushandisi, pakati pemamwe mamiriro. Nekudaro, parizvino, hapana ruzivo rwakakwana rwesainzi rwunogona kuvimbwa nekumisikidza iwo muyero wakakodzera wemushonga.
Kana iwe ukatenga chigadzirwa cheDMAA chemafuta / uremu, ita shuwa kuti iwe unoverenga uye uteedzere rairo yekushandisa pazita rayo uye bvunza chiremba wako, wemishonga kana chero imwe nyanzvi inozivikanwa yehutano usati waishandisa.
Kazhinji, dosi rekutanga reDMAA rinotangira kubva 10 mg kusvika 20mg. Kana kushumirwa kweiyo DMAA-inosanganisa chigadzirwa chesarudzo yako. Izvi zvinokubatsira iwe kuti uone uye unzwe kuti mushonga uyu ungangokubata sei kana iwe ukautora mune yakazara muyero.
Sezvo nguva inopfuura, iwe unogona kuwedzera iyo dhosi kusvika makumi mana kana 40 mg pazuva. Nekudaro, hapana humbowo hwechokwadi hunotsigira madosi emazinga.
Iwo anoita kunge ari akajairwa madheji ezvigadzirwa zvine dimethylamylamine. Izvo zvinokosheswa zvinobva mukushandisa kurudziro yakapihwa nevakagadziri veiyo DMAA inowedzera zvino pamusika.
Iwe haufanire kushandisa chigadzirwa cheDMAA zuva nezuva kana iwe uchida kuwana mhinduro dzakanakisa. Iyo mizhinji yeDMAA inovapedza inovadya ivo vaviri kana katatu pavhiki zvakanyanya. Nekushandisa zvinowedzeredza mune yakadai frequency, iwe unokwanisa nyore kudzivisa kukudziridza kuvimba pane zvigadzirwa.
Pamwe, shandisa iyo DMAA mapiritsi kana iwe uchida simba kana kutarisisa kusimudzira kana maminetsi makumi matatu usati waita kurovedza muviri Nekudaro, iwe unozogona kunzvenga zvimwe pre Workout inowedzera mhedzisiro.
Yepasirose yepamusoro-soro 4 Pasi Pese-Kutengesa Mafuta Kupisa Zvinodhaka
Kune mishonga yakasiyana siyana inobatsira kurasikirwa nemafuta kuburikidza nekuderedza kushuva, kuwedzera metabolism yemuviri uye / kana kuchengetedza chishuwo chakakodzera. Mafuta anopisa zvinodhaka zvinogona zvakare kuti munhu awedzere kugona kwekuita basa nekuwedzera simba rake uye kutarisisa.
Iyi tafura inotevera inoratidza yepamusoro mana inotengesa mafuta kupisa zvinodhaka pasi rese.
Zita remishonga uye CAS Nhamba Mashandiro ayo
Synephrine upfu -CAS: 94-07-5 Synephrine poda ndeye beta-agonist inoshanda nekuwedzera muviri wemuviri metaboli, kushandiswa kwekoriori uye masimba emagetsi
1,3-dimethylamylamine (DMAA powder) - CAS 13803-74-2 Iine chimiro chemakemikari chakafanana neiyo yeEphedrine, 1,3-dimethylamylamine inogadzirwa neine neural inosimudzira inoshandiswa sechinhu chikuru muzvinhu zvinovaka muviri kubatsira mukuvandudza kweanomhanya mashandiro uye nekusimbisa simba.
Clenbuterol hydrochloride-CAS 21898-19-1 Kunze kwekuve nesimba rakasimba rinopisa mafuta, Clenbuterol hydrochloride zvakare ine chirevo che thermogenic mhedzisiro nekuwedzera BP uye nekumutsa moyo kuti ushande zvakanyanya.
Kunze kwezvo, inokonzeresa kuti glycogen iparadze, nekudaro kupisa kwemafuta emuviri.
Salbutamol (Albuterol) - CAS 18559-94-9 salbuterol powder yakatanga kushandiswa nevanhu vane asthma kana chisingaperi obstructive pulmonary chirwere chekuvandudza kufema kwavo. Nekudaro, mazuva ano, mushonga uyu unonyanya kushandiswa kukurudzira kurasika kwemafuta nekukurumidza, kwekuchengetedza mhasuru panguva yekurasikirwa kwemafuta pamwe nekusimudzira kutsungirira kana munhu achinge achirasa mafuta ekushanda.
Kana iwe uchida kutenga dmaa kana chero yemafuta ari pamusoro anopisa zvinodhaka, iwe unogona kungoita kudaro zvisina kunetseka kubva kuAASraw, com.
1, 3-dimethylamylamine inopa akawanda mabhenefiti kusanganisira kubatsira mukuvandudza kweyepfupi-ndangariro ndangariro uye chiito chekufungidzira pamwe nekuvaka muviri uye kupisa kwemafuta emuviri. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unotaurirana nemukurumbira wezvehutano mupi uye unoteerera kune yakakurudzirwa muyero kuti udzivise zvinogona kuitika mhedzisiro senge yakakwira BP, nyaya dzemwoyo uye kukuvara kweitsvo, pakati peimwe njodzi dzehutano dzakabatana.
Zvakangodaro, kuomerera padanho chairo haisi vimbiso yekuti hauzowane mhedzisiro. Zvakare, zvakakosha kuti uzive kuti hapana humbowo hwesainzi hunobatanidza izvi zvinoitika nekushandisa kweDMAA chete; ndiko kuti, mukushaikwa kwezvimwe zvekuwedzera zvinongedzo.
Bloomer RJ1, Farney TM, Harvey IC, Alleman RJ - Chengetedzo nhoroondo ye caffeine uye 1,3-dimethylamylamine yekuwedzera mune vane hutano varume - Hum Exp Toxicol. 2013 Mbudzi; 32 (11): 1126-36. doi: 10.1177 / 0960327113475680. Epub 2013 Kukadzi 19.
Schilling BK, Hammond KG, Bloomer RJ, Presley CS, Yates CR. - Physiological uye pharmacokinetic mhedzisiro yemuromo 1-dimethylamylamine manejimendi mune varume - BMC Pharmacol Toxicol. 1,3 Gumiguru 2013; 4:14. doi: 52 / 10.1186-2050-6511-14.
"1,3-Dimethylamylamine," Examine.com, yakaburitswa musi wa24 Kubvumbi 2014, yekupedzisira yakagadziridzwa musi wa14 Chikumi 2018,
Vorce SP, et al. Dimethylamylamine: mushonga unokonzera yakanaka immunoassay mhedzisiro yeamphetamines. J Anal Toxicol. (2011)
Gee P, Jackson S, Easton J. Imwe piritsi inovava: kesi yehupfu kubva kuDMAA mapiritsi epati. NZ Med J. (2010)
Iyo Merck Index: An Encyclopedia yeMakemikari, Zvinodhaka, uye Biologicals (Bhuku).
Lisi A, et al. Zvidzidzo zve methylhexaneamine mune zvinowedzera andgeranium mafuta. Chirwere Bvunzo Anal. (2011)
Bloomer RJ, et al. Mhedzisiro ye1,3-dimethylamylamine uye caffeine yoga kana musanganiswa pamwoyo uye kuwedzerwa kweropa mune varume nevakadzi vane hutano. Phys Sports. (2011)